Friday, 12 Apr, 2019 12:25 PM
सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले निराश नहुन भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर यो एक वर्षको अवधिमा जनतामा केही नैराश्य अवश्य देखिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रतिपक्षी दलले झैं सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । संसदमै सत्तापक्षका सांसदहरूबीच सरकारका कामबारबाहीबारे असन्तुष्टि पोखिने गरेको छ । अर्कातिर पार्टी एकतामा पूर्वएमाले र नेकपा माओवादीबीच भागबन्डा मिले पनि पूर्वएमाले गुटमा भागबन्डा नमिल्दा समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी भइरहेका खबरसमेत सार्वजनिक भएका छन् । संसदका हरेकजसो बैठकमा भाग लिएर सरकारको बचाउमा खरोरुपमा उत्रिँदै विपक्षी सांसदहरूलाई काउन्टर हान्ने सांसद हुन् भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद महेश बस्नेत । पूर्वउद्योगमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतसँग न्यूजसेवाले यीनै विविध विषयमा कुराकानी गरेको छ ।
दुई तिहाइको सरकार छ, तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । एक वर्षको अवधि हेर्दा यति बलियो सरकारको यति सुस्त गति किन ?
निकै लामो निराशापछि हामीले संविधान बनायौँ । तीनै तहको निर्वाचन गयौँँ, राज्य पुनःसंरचना गयौँ र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्यौँ । मौलिक हकसम्बन्धि कानुनहरू बनायौँ ।, कर्मचारीहरूको समायोजन जस्ता धेरै काम गयौँ यो एक वर्षको अवधिमा ।
यो गर्दागर्दै पनि जनतामा किन निराशा रह्योे भने जनतामा एक त दुई तिहाइको सरकार बन्यो, राज्य पुनःसंरचना भयो, संविधान बन्यो, फेरी निर्वाचन भयो, यी तमाम कारणले तीब्र गतिमा विकास हुनुपर्छ भन्ने महत्वाकांक्षा भयो । वस्तुगत परिस्थिति हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यसमा खासै परिवर्तन थिएन । हाम्रो सिस्टम, कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको थिएन र राज्यका संरचनामा पनि त्यो देखिएन । त्यसो भएकाले कुनै तालमेल नै हुन सकेन । अर्को, स्रोत–साधनका हिसाबले राजस्वको चुहावट, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा सही ढंगले नियन्त्रण गर्न सकेका थिएनौ । जुन खालले राज्यको आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेनौ । यसैले तीब्र गतिमा काम गर्न सकेनौ । यद्यपि यो सरकारले एक वर्षको अवधिमा एउटा आधार तयार गर्यो । किनभने हामीसँग कुनै व्यवस्थित डिजाइन थिएन । जस्तै अहिले रेलमार्ग, पानीजहाज ल्याउने कुरा गर्दैछौँ । ७२ वटा शो–केस बनाएर लगानीका कुरा गर्दैछौँ । अहिलेसम्म हामीकहाँ १३ सय जना अट्ने सम्मेलन हल छैन ।
अब एकैचोटी गर्न खोजियो भने त न हामीसँग डीपीआर छ, न डिजाइन । हामीसँग डीपीआर र डिजाइन गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि छैन । बहुदलिय व्यवस्था आएपछि त नेपालमा इञ्जिनियरिङ कलेज खुलेका हुन् । अहिले २ सय ५० भन्दा बढी पुगे । भर्खर हामीले प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्दैछौँ । र अहिले जुन लगानी सम्मेलन सरकारले गर्यो त्यसमार्फत हामीले भोलि नेपाल कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गयौँ । लगानीकर्ताहरूलाई एउटा आकर्षण दियौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिजो नेपाल ब्याक बेञ्चमा बस्थ्यो । अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजी भाषामा जुन कमान्ड दिनुभएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आकर्षण देखियो । त्यसैले विदेशका झन्डै सातसय लगानीकर्ता आए र उनीहरुको ठूलो रुची पनि देखियो । हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । यथार्थ बुझिसकेपछि अब हामी आशावादी हुन्छौँ । जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । अघिल्लो पटक अर्थमन्त्रीले पहिलो दुई वर्ष गाली खाने त्यसपछि बल्ल ताली खाने भन्नुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका डाटाहरू हेर्ने हो भने निकै सुधार देख्नुहुन्छ । केही गलत भ्रमहरु मिडियाले फिँजाएको थियो । आज एडीबी र वल्र्ड बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको छ र लगानी गर्न योग्य छ भनेर बोलेको छ । त्यसले परिस्थिति सहीढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ ।
तपाईले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही कुरा दोहोर्याइरहनुभएको छ, तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूमा तीब्र असन्तुष्टि छ नि, सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर ? सरकारले काम गर्न नसकेको हो या पार्टी एकतामा कुरा नमिलेर यता रिस पोखिएको हो ?
हिजो पार्टी एउटा चरणमा थियो । अहिले सत्तामा छ र समृद्धि प्राप्तिको चरणमा छ । अहिले संघर्षभन्दा पनि सिर्जनशीलता र जनसेवा हाम्रो कार्यदिशा हो । यो चरणमा मानिसले आफ्नो भूमिका खोज्ने हो । सरकार र पार्टीका उच्च स्थानहरू सिमित छन् । आकांक्षीहरू धेरै छन् । नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो । जस्तो सचिवालयको संख्या थोरै छ, आकाँक्षी धेरै छन् । मन्त्रालय थोरै छ आशा गर्ने धेरै । पर्नेहरू खुसी छन् । नपर्नेहरू रिसाएका छन् । अब ती आकाँक्षीहरूले मेरो योग्यता छ, काम गर्छु भन्नुपनि स्वभाविकै हो । नेताहरूले दिन नसक्नु पनि स्वभाविकै हो । किनकी पद थोरै छन् । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गयौँ । तर संस्कार र अभ्यास धेरै नगरेकाले भोलि दुई तिहाइ आउला–नआउला, बहुमत आउला–नआउला, यही नै हाम्रो मौका हो भन्ने ढंगले असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएको देखिन्छ ।
अर्को दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकतामा अनेक खालका जटिलता पैदा भए । जसको कारण प्रक्रिया अलि ढिला भयो । एकता चाँडो भएको भए वारपार भइहाल्थ्यो । ढिला भएकाले पनि असन्तुष्टिहरू आएका छन् । तेस्रो कु्रा नेतृत्व वर्गको कामको क्षेत्र एकदम फराकिलो भयो । हिजो पार्टीको काममा मात्र सिमित भएकाहरु शासकीय काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आयो । यसोहुँदा कामको सन्तुलन मिलाउन पनि समस्या भयो । मलाई लाग्छ पार्टीको पद्धति र सैद्धान्तिक कुराहरू टुंगिँदै जानेछन् ।
तपाईहरूले आधार वर्ष भनिरहँदा जनतामा आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसमाथि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सरकारको विरोध गर्दा झनै असन्तुष्टि बढेको हो ?
आजका जनताको चेतना धेरैमाथि छ । सूचना–प्रविधिको कारण विश्व साँघुरिएको छ । अमेरिकाले गरेको कुरा लाइभ हेर्न सक्छौँ । २२ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरूले त्यो देशको उन्नति र प्रगति नेपालसँग तुलना गर्छन् । हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति एकातिर छ तर विकसित मुलुकसँग हाम्रो तुलना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत धेरै नकारात्मक टिप्पणी आउने गर्छ । त्यसैमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर बोलिदिएपछि थप मलजल भएको छ । यो विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । जस्तो लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि परिस्थिति एउटा थियो, आज बेग्लै छ ।
हिजो प्रधानमन्त्रीले रेल निर्माण गर्ने कुरा गर्दा सबैले उडाउँथे । आज डीपीआरको प्रक्रिया सुरू भएको छ । पानीमा लगानी भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सेयर किनेर सुरू गरेपछि त्यसले उत्साह दिएको छ । हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि भ्रष्ट्राचार गरेको सुनियो । आज रोकिएको छ । तल–तल भ्रष्ट्राचार छ । तर रोकिने क्रम सुरू भएको छ । अख्तियार, राजस्व, सम्पत्ति शुुद्धिकरणमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति नियुक्त भएका छन् । हिजो भन्सार, मालपोतमा जानका लागि दौडादौड हुन्थ्यो । त्यहाँ जान घुस खुवाउने प्रचलन थियो । आज त्यहाँ कर्मचारी जानै मान्दैनन् । यो भनेको सरकारले ठीक गरेको रहेछ नि त ।
पछिल्लो समय राजस्व २५ प्रतिशत बढी उठेको छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले भ्रष्ट्राचार रोकेर सुशासन कायम गर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा मुलुक बनाउनका लागि निरन्तर लागिरहनुभएको छ । संविधानदेखि त्यसमा रहेका कानुन, कर्मचारी, प्रहरीको संयोजनसम्मका काम गर्न एक वर्ष लाग्यो । यो हेर्ने हो भने संसारकै इतिहासमा तीब्र गतिमा भएको छ । त्यसैले जनताको निराशा विस्तारै आशामा परिणत हुँदै जानेछ । आशा र उत्साह भएपछि सिंगो मुलुक गोलबन्द रूपमा अगाडि बढ्छ । सरकारले केही आलोचना खाए पनि राम्रै ढंगले मुलुकलाई अघि बढाइरहेको छ ।
तपाई संसदका हरेकजसो बैठकमा बोलेको देखिन्छ । एकथरी सांसद सरकारको विरोधमा बोलिरहेका हुन्छन् भने तपाईँलगायतका सांसद भने सरकारको बचाउमा उहाँहरूलाई काउन्टर गर्नुहुन्छ । संसदमै तालमेल देखिएन नि ?
संसदीय अभ्यासको कमीले गर्दा हामीमा लोकतान्त्रिक तथा संसदीय संस्कार आइसकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने सत्तापक्षका सांसदले सरकारको विरोध गर्न मिल्दैन । प्रतिपक्षले बजेटको संशोधनमा एक रूपैया संशोधन दर्ता गर्नुभयो । यो किन गरेको भने प्रतिकात्मक रूपमा । यो कुरा हाम्रा साथीहरूले बुझ्नुभएको छैन होला । पार्टीले लिएका कतिपय कुरा,नेताका कार्यशैलीका विषय होलान् । त्यो भन्ने ठाउँ छ । सच्याउने र झकझक्याउने ठाउँ छ ।
संसदीय दलको बैठकमा मेरो प्रस्तुति आलोचनात्मक हुन सक्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आलोचना गर्न सकिन्छ । तर सदनभित्र सरकारको विरोध गर्ने ढंगले जानुहुँदैन । कतिपय नेताहरूले जिम्मेवारी नपाएका लगायत अनेकथरी असन्तुष्टि सदन र मिडियामा पोख्ने प्रवृति देखापरेको छ । कुरा एकातिर छ असन्तुष्टि अर्को ढंगले आइरहेको छ । भर्खर पार्टी एकता भएकाले यस्तो भएको हो । जस्तो तपाईँ नारायणगढ जाँदा त्रिशुली र सेती मिसिएको ठाउँमा मिसिएपछि अलि तलसम्म सेतोधार देखिन्छ । जतितल गयो त्यो मधुरो हुँदै जान्छ र नारायणीमा पुग्दा एउटै देखिन्छ । यस्तै दुईवटा पार्टी मिल्दा निश्चित अवधिसम्म दुई धार देखिन्छ । तर यो धार अहिले मधुरो हुँदै गएको छ । त्यसकारण कहाँ जाने, कहाँ नजाने, कहाँ बोल्ने, कहाँ नबोल्ने अलमल जस्तो देखिएको हो ।
अर्को सांसदहरू भनेका विधि निर्माता मात्रै होइनन् । विकासका पहलकर्ता पनि हुन् । यो कुरा अर्थमन्त्रीज्यू अलिकति ग्राउन्ड नेतृत्व नबुझेको हुनाले अघिल्लो बजेटमा सांसदहरूलाई समेट्ने, राय लिने कुरा अलिक कम भयो । जसकारण पनि सांसदहरूले केही नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ । अर्को पार्टी एकता नभइसकेकाले संसदीय दल पनि त्यति व्यवस्थित छैन । जस्तो प्रमुखसचेतकले सबै सांसद चिन्नुहुन्नथ्यो । सचेतकले पनि धेरै चिन्नुहुन्न । भर्खर आउनुभएको छ । यो एक वर्षको दौरानमा बल्ल यसको क्षमता यो रहेछ । यो यहाँको सांसद रहेछ भनेर चिन्ह् र बुझ्न थाल्नुभएको छ । समयले यी अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दे लैजान्छ ।
पार्टी एकता अन्तिम चरणमा छ भनिएको छ, तर माधव नेपाल लगायतका असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूलाई पेलेर गए तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी गरेको कुरा आएको छ नि ?
पार्टी एकता प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउने साथीहरूले विधि र प्रक्रियाका कुरा गर्दै यो गरिराख्नुभएको छ । दुईवटा पार्टीबीच चुनावी तालमेल भयो । सुरुमा दुई पार्टी मिल्ने, चुनाव चिन्ह् सूर्य लिने भन्ने कुरा आयो । तर पछि कुरा मिलेन र दुईवटा चुनाव चिन्ह्मा निर्वाचन भयो । पार्टी एकता हुन्छ भनेर पत्याइएको थिएन । एकता भयो । यो कसले गरेको भन्दा पार्टीका दुईवटा अध्यक्षले गर्नुभयो । मान्छेहरूको बुझाइ के हुन्छ भने दुईवटा व्यक्तिले गरेर हुन्छ र भन्छन् । अध्यक्ष भनेको व्यक्ति होइन । अध्यक्ष भनेको संस्था हो । पार्टीको महाधिवेशन नहुँदा केन्द्रीय कमिटी पार्टी हो । त्यो नहुँदा स्थायी कमिटी हो । स्थायी कमिटी नहुँदा सचिवालय पार्टी हो । कार्यदलले काम गर्न नसकेपछि दुई अध्यक्षले टुंग्याउन्ुभयो । यति ठूलो पार्टीमा सयमा सय नै सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने त हुँदैन ।
आज एकता प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्ने पदहरू अन्तिम होइनन् । जसले जिम्मेवारी पाएको छैन, उसले फेरी जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहन्छ । जिम्मेवारी पाइएन भनेर हारगुहार गरेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कतिपय नेताहरूले विगतमा एमाले पार्टीभित्र रहेको गुटबन्दी र राजनीतिक अन्तरविरोधको जुन ढर्रा छ, त्यही ढर्राभित्र रहेर समानान्तर कमिटी बनाउने ढंगले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छ । मलाई लाग्दैन, उहाँहरूको त्यत्रो धेरै समानान्तर कमिटी बनाउने हैसियत छ । पार्टी विभाजनको दिशामा हिड्ने कसैको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन । सफल हुने भए वामदेव, सीपी सफल हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसभित्र पनि देउवाजीहरु पmुटे पनि फेरी एकतावद्ध हुनुपर्यो ।
पार्टीमा समानान्तर कमिटी बनाउने र फुटाउने खेल खेल्नेलाई न कार्यकर्ताले न त जनताले साथ दिन्छ । उहाँहरूले सायद पार्टीभित्र आफ्नो पहुँच बढाउन । आफ्ना भनिएका साथीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एउटा बार्गेनिङ पोइन्टका रूपमा उठाउनुभएको होला । यसलाई दुईवटै अध्यक्षले विवेकपूर्ण तरिकाले फैसला गर्नुहुन्छ । कुनै समानान्तर कमिटी बन्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन ।
प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा पूर्व अध्यक्षहरू पेलिएको महशुस गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ?
हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गछौँ । यसमा एकता र संघर्ष सँगसँगै भइराखेको हुन्छ । हरेक चिजमा अन्तरविरोध हुन्छ । त्यो अन्तरविरोध कहीँ शत्रुतापूर्ण त कहीँ मित्रवत हुन्छ । पार्टी भित्रको अन्तरविरोध भनेको मित्रतापूर्वक हुन्छ । कहिलेकाहीँ नबुझेर साथीहरूले त्यसलाई शत्रुतापूर्वक अगाडि बढाउन खोज्छन् । पार्टी भनेको त्यो अन्तरविरोधको व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि हामीले विधान बनाउने, महाधिवेशन गर्ने । सबै प्रक्रियालाई विधिवत गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बनाउने, चुनाव गर्ने हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले विवेक पुर्याउनुपर्छ । नेता यत्तिकै हुँदैन । यसका लागि लामो एउटा यात्रामा खारिएर, विभिन्न आरोह–अवोध पार गर्दे क्षमता, हैसियत र क्रियाशीलताबाट हुने हो । मलाई लाग्छ उहाँहरूले विवेक पुर्याउनुहुन्छ । जुन ढंगले एकदम असन्तुष्टि भयो,केके भयो भनिएको छ यो सत्य होइन ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका कुरा पनि आइरहेका छन् । स्व.रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उक्त मन्त्रालय पनि रिक्त छ । यसमा तपाईको नाम चर्चामा छ ? तपाईँ मन्त्री बन्न लाग्नुभएको हो ?
सरकार बनेको एकवर्ष भन्दा बढी भएको छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भनेको प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार हो । एक वर्षको कामको समीक्षा गर्दैै केही मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने विचार पाार्टीमा जबरजस्त उठिरहेको छ । त्यो आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनःगठन हुन्छ भनेर भन्दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पुनःगठन त हुन्छ तर उचित समय आएपछि भन्नुभएको छ । मलाई लाग्छ लगानी सम्मेलन र पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भएकाले अहिले हुन सकिरहेको छैन ।
पार्टी एकता र मन्त्रीमण्डलको पुनःगठन सँगसँगै हुनसक्छ भन्ने मेरो पनि अनुमान छ । जहाँसम्म मेरो नाम चर्चामा आयो, पहिलोपटक सरकार बन्दा मैले आफैले म कुनै दाबेदार होइन भनेर घोषणा गरेको थिएँ । यो एक वर्षको दौरान सदनभित्र मैले खेलेको भूमिका र भक्तपुर जस्तो निकै कमजोर क्षेत्रमा निर्वाचन जितेर जुन भूमिका खेलेँ । यो कारणले प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना र परिकल्पना पूरा गर्नका निमित्त म र मजस्ता साथीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र उठिरहेको छ । मैले मलाई यो चाहिन्छ भनेर कहीँ पनि लविङ गर्न गइन । तर मेरो विगत हेर्ने हो भने मैले जे–जे जिम्मेवारी पाएँ एकदम दक्षता र इमानदारीका साथ निभाएको छु । त्यसकारण भोलि मन्त्रीमण्डलको पुनःगठनहुँदा मलाई कुनै जिम्मेवारी दिने स्थिति बन्यो भने त्यो कुशलताका साथ निर्बाह गर्न सक्छु । म तयार छु त्यसका लागि ।
दुई तिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्री निकै दौडधुप पनि गरिरहनुभएको छ, तर पनि अपेक्षाकृत ढंगले विकास हुन सकिरहेको छैन । खासमा नेपालको सिस्टमै गलत हो कि कहाँनिर समस्या छ ?
यो एकदम महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । लामो समयदेखि हामीले गरेको अभ्यास पनि ठिक छैन । प्रवृति पनि । सदनमा सांसदले प्रतिनिधित्व गरेको सिटको आधारमा दुई तिहाइ आयो । यो दुईतिहाइ मुलतः विधि निर्माण गर्ने कुरामा प्रयोग भयो । त्यसमा त उसले सफलतापूर्वक आफ्नो दक्षता देखाइहाल्यो । अब समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न त विकास गर्नुपर्ने छ । बजेट परिचालन गर्नुपर्ने छ । यसमा सरकारले जसरी सोचेको हो त्यो ढंगले हुन सकेन । जस्तो करोडौंको विकास परियोजना दुईवटा बिजुलीको पोल नसारिदिनाले हुन सकेन । सरकारी निकायबीच समन्वय, तालमेल नहुँदा धेरै कामहरू अलपत्र परिरहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र विकासलाई कार्यान्वयन गर्दा देखिएका कमजोरीहरूका कारणले पनि अलिक समस्या परेको हो । जस्तो एउटाले ठेक्का पार्ने, मोविलाइजेसन अर्कैले गर्ने, ठेकेदार बेपत्ता हुने, उसलाई समाउने हामीसँग कुनै माध्यम पनि छैन । कारबाही गर्ने कुनै ऐनकानुन पनि छैन । उल्टो ठेकेदारले सरकारसँग क्षतिपुर्ती माग गर्दै मुद्धा हाल्ने । यसमा सरकारले क्रियाशीलता देखायो भने महासंघ सक्रिय ढंगले अगाडि आएर आन्दोलन गर्ने । मुलुकी ऐनको अपराध संहिता निर्माण गर्ने क्रममा डाक्टरहरूले मान्छे मार्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, ड्राइभरले दुर्घटना गरेर ब्याक गरेर मार्न पाउनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलन त देख्यौँ नि । विकृति विसंगतिको एउटा चरमसीमा आयो । विगतको द्धन्द्ध लगायतका कारणले आपराधिक कर्म व्यापक भयो । अर्को यस्तो भ्रष्ट्राचारको माइन्ड सेट छ ,समाज नै भ्रष्ट भइसकेजस्तो । छोरालाई दूध किन्न पठाउँदा पनि एक प्याकेट दूध ल्याएर अरू पैसा फिर्ता नहुने अवस्था छ ।
भ्रष्ट संस्कार विकास भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन हुने कुरा भएन । घरको जग बन्दा घरको आकृति देखिँदैन । यो आधारवर्षमा त्यही भएर अलिकति निराशा देखिएको हो । मलाई लाग्छ अब सरकारले जताततैबाट व्यवस्थित गर्दे,भ्रष्ट्राचार, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ । औद्योगिकरणको वातावरण बनिरहेको छ । कृषि,उद्योगलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्किमहरू आइरहेका छन् । सरकारले विकासको गति जसरी दिइरहेको छ, यसले तीन चार वर्षमा राम्रो परिणाम ल्याउँछ र जनता पूरै आशावादी र उत्साहित हुनेछन् । यसको लागि सरकारले आमजनतालाई गोलबन्द तरिकाले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाले धेरै काम भइरहेका छन् र हुँदै जानेछन् ।